सित्तैका ७ एन्टीभाइरस, तपाईँको छनौट कुन? « Clickmandu
सित्तैका ७ एन्टीभाइरस, तपाईँको छनौट कुन?
प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७३, शनिबार ११:२२
विन्डोज कम्प्युटर प्रयोगकर्ताको ठूलो टाउको दुखाई हो भाइरस । समाधानको लागि भनेर बजारमा सयौं एन्टीभाइरस सफ्टवेयरहरू पाइन्छ । कतिपय किन्नुपर्छ भने कतिपय सित्तैमा ।
पैसा तिरेर किन्दैमा राम्रो पाइन्छ भन्ने पनि छैन् । सित्तैमा पाइने एन्टीभाइरसले पनि तपाइका धेरै समस्या समाधान गरिदिन्छन् । तर सबै एन्टिभाइरस सफ्टवेयर उत्तिकै प्रभावकारी पनि हुँदैनन् । अहिले सित्तैमा पाइने राम्रा एन्टीभाइरस कुन-कुन हुन त?
१. विन्डोज डिफेन्डर
विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम बनाउने कम्पनी माइक्रोसफ्टले नै बनाएको यो एन्टिभाइरस पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय छ । विन्डोज ८.१ र विन्डोज १० मा भने यो सँगसँगै आएको छ । विन्डोज ७ का प्रयोगकर्ताले यो डाउनलोड गरेर इन्सटल गर्नु पर्दछ । पैसा लाग्दैन् । यसमा ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने तपाइको विन्डोज सफ्टवेयर कपि गरेको भर्सन हैन भने मात्र यो प्रयोग गर्न मिल्छ । पाइरोटेटमा मिल्दैन ।
एभिराले राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्छ । यसमा विकल्प छनौटहरूपनि थुप्रै छन् । चलाउन पनि सरल छ । यसको नराम्रो पक्ष भनेको स्क्यान गरिराखेको बेला मेमोरी बढी प्रयोग गर्छ र कम्प्युटर सुस्त हुन्छ ।
कुनै बेला निकै लोकप्रिय निशुल्क एन्टीभाइरस एभिजीको लोकप्रियता बिचमा केही वर्ष खस्किँदै गयो । पछिल्लो समय सुधार गर्न सफल भएपछी अहिले यो बढि चल्ने एन्टी भाइरसमा पर्दछ ।
एभास्ट तपाइको कम्प्युटर मात्र नभइ नेटवर्क सुरक्षामा पनि लोकप्रिय छ । तपाईको राउटर र अन्य जोडिएका कम्य्टरको सुरक्षा पनि यो एन्टीभाइरसले हेर्छ । यसमा भएको पासवर्ड म्यानेजर एडवन प्रयोग गर्नुभयो भने तपाइको ब्राउजरमा स्टोर भएर बसेका पासवर्डको जानकारी र सुरक्षा चेतावनी पनि दिन्छ ।
५. बिट डिफेन्डर
यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको कम्प्युटरको कम मेमोरीको उपयोग हो । जसले गर्दा स्कान वा मोनिटर गरि राखेको बेलामा पनि अरू काम गर्न असुविधा हुँदैन । कम्प्युटरमा पहिल्यै भाइरसको समस्या छ भने इन्सटल गर्न केही झमेला हुन सक्छ ।
पेन ड्राइभ (युएसबी स्टीक)को प्रयोग सबैभन्दा बढि भाइरस भित्रिने कारण हो । पण्डाको सबैभन्दा राम्रो भनेकै युएसबी प्रोटेक्सन फिचर हो । पेन ड्राइभमा आएका भाइरस अटोमेटिक इन्स्टल हुनबाट रोकेर यसले यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ । यो छरितो पनि छ ।
७. लाभासफ्ट एड-अयर
इन्टरनेटबाट सर्ने भाइरसबाट सुरक्षा प्रदान निकै लोकप्रिय लाभासफ्टले असुरक्षित वेभसाइट लिंकलाई ब्राउजरमा ब्लक गरेर प्रयोगकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ । यसका केही राम्रा सुबिधाहरू भने निशुल्क भर्सनमा उपलब्ध छैनन् ।
कुन एन्टीभाइरस उपयुक्त?
तपाइको कम्प्युटरमा अलि पुरानो र हार्डवयरको क्षमता कम छ भने थोरै मेमोरी प्रयोग गर्ने छरितो एन्टी भाइरस रोज्नु पर्दछ । क्षमता कम भएको कम्प्युटरमा कतिपय एन्टी भाइरसले झन सुस्त बनाइदिन्छन् । यसको लागि तपाईले एन्टी भाइरस डाउनलोड गर्ने बेला कुनको हाडवयर रिक्यायरमेन्ट कति छ भनेर हेर्नुभयो भने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।
अपडेट नियमित गर्नुपर्छ
जुनसुकै एन्टीभाइरस सफ्टवेयर राखे पनि इन्टरनेटबाट त्यसलाई नियमित अपडेट नगर्ने हो भने तपाई सुरक्षित नहुन सक्नुहुन्छ ।
साख जोगाउला त नयाँ म्याकबुकले?
तामझामसाथ बुधबार एप्पलले आफ्ना म्याकबुक सिरिजका नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्यो । बिगतभन्दा भिन्न यो वर्षका
हार्ड ड्राइभमा ठाउँ छैन? चिन्ता नगर्नूस
भाइरस वा अरू गडबडीले एक्कासि कम्युटर फर्माट गर्नु पर्ला वा तपाईको हार्ड ड्राइभमा उपलब्ध ठाउँ
किबोर्ड बिनाको ‘योगा बुक’, १५ घन्टा ब्याट्री टिक्ने
जर्मनीमा बिहिबारबाट सुरू भएको युरोपकै ठूलो ग्याजेट मेला आएफएमा चिनियाँ कम्पनी लेनोभोले एक आकर्षक प्रोडक्ट